प्रिमियर इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १८ असार २०७६)
कम्पनीले पूँजीवृद्धि गर्न लगानीकर्तालाई ८४ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित गर्न असार ३१ गते कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा समेत बोलाएको छ । साधारणसभाका लागि असार २० गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने भएकाले प्रस्तावित लाभांशका लागि असार १९ गतेसम्म शेयर कायम गर्नुपर्नेछ । बोनस शेयर कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश नभएकाले उक्त कर भने लगानीकर्ता आफैले बेहोर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५८ करोड ४० लाख छ । प्रस्तावित बोनस शेयर वितरण गरेपछि चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख ६० हजार पुग्नेछ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि बोनस शेयर वितरण गर्न लागेको हो । मंगलवार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार १२९ कायम भएको छ । यस दिन शेयरमूल्य ११ अंक घटेको हो ।
2019-07-03 - 83 view(s) - abhiyan